Mahara kana akaderedzwa maapplication nemitambo kwenguva yakatarwa | IPhone nhau
Nhasi ndatora kufamba kwakanaka kuburikidza neApp Store ye iPhone ne iPad uye ndawana akati wandei maapplication nemitambo iri kutengeswa. Mamwe acho akasununguka zvachose, uye mamwe acho anopiwa nezvidimbu zvinosvika makumi mashanu kubva muzana zvinoita kuti zvidikanwe.
Sezvauchaona, pane zvishoma zvezvinhu zvese, kubva kumitambo kuenda kune zvekushandisa uye chirongwa chekudzidzisa. Iko kune kunyange imwe inozivikanwa zvikuru, zvekuti muna 2014 yakahwina Apple Design Awards, imwe yeanogamuchirwa naApple ekugadzira. Saka gadzirira uye tora mukana weSvondo mangwanani kusevha maeuro mashoma. Asi kurumidza, nekuti hatizive kuti izvi zvinopihwa zvichagara kwenguva yakareba sei.
2 Asingagumi Nereza III
3 Solar Walk 2 - mapuraneti esolar system
4 DudziroSafari - Dudziro & Taura Kuwedzeredzwa kweSafari
5 Hondo Academy 2: Kumabvazuva Mberi
Tichatanga nemutambo, uye nemutambo wevakakurumbira uye vanozivikanwa. Monument Valley Ndicho matatu epamhepo dambanemazwi mutambo iyo muna 2014 yakahwina mubairo wakapetwa kaviri: mubairo wemutambo wakanakisa wegore weIOS, uye mubairo wekugadzirwa kwakanyanya kwegore.
MuMonument Valley, iwe unofanirwa kushandisa zvisingaite zvivakwa uye kutungamira chinyararire mwanasikana wamambo kuburikidza nenyika yerunako isingaenzanisike.
Monument Valley irwendo rwechokwadi kuburikidza nezvivakwa zvinonakidza uye zvisingabviri geometri. Tungamira chinyararire Princess Ida kuburikidza nezvisingazivikanwe zviyeuchidzo, tsvaga nzira dzakavanzika, zarura maziso ekunyepedzera uye kupenga enigmatic Raven Men.
Mutengo wadzo wenguva dzose uri € 3,99 asi ikozvino unogona mhuru pahafu yemutengo, chete € 1,99, saka usarasikirwa nemukana wekutamba mumwe weakanyanya kutsoropodza uye mushandisi-anozivikanwa mitambo.
Asingagumi Nereza III
Asingagumi Nereza III chikamu chechitatu cheiyi saga inozivikanwa, a chiito chakazara mutambo nemifananidzo inoshamisa iyo inotenderera "nyaya inonakidza yerudo, kutengesa uye kuregererwa."
Siris naIsa vanobatana pamwe naMambo King Raidriar mukuyedza kukuru kutora pasi Kuzivisa Zvakavanzika uye neuto rake reIsafi Titans. Zarura zvakavanzika zvitsva uye sunga simba reiyo Infinity Sword mune ino isingagumi nhambo pakati pemagamba nevakaipa.
Huru hunhu hwayo hunosanganisira nyore-kushandisa-kushandisa intuitive uye tactile kudzora, inesimba nharaunda, yechipiri mamishini… Unogona kutora maviri marudzi ehunhu, imwe neimwe iine matatu akasiyana masitayera ekurwa uye akawanda zvombo. Zvese izvi uye nezvimwe zvakawanda, ikozvino zve chete € 0,99 kwenguva yakati rebei.
Solar Walk 2 - mapuraneti esolar system
Solar Kufamba 2 zvakanaka chirongwa chekudzidzisa kuti vana nevakuru vadzidze zvakawanda nezvese zvakasikwa uye nezvedu zvezuva.
Iyo nyowani-nyowani Solar Walk 2 app chishandiso chinodzidzisa chinoshanda ne state-of-the-art mifananidzo tekinoroji. Solar Walk 2 inopa encyclopedia inopindirana yezuva iro risati ramboonekwa. Zvichienderana nemitemo chaiyo yepanyama uye data repamberi rezvekutora mifananidzo, Solar Walk 2 inouya kune yakajeka ine inoyevedza inoonekwa yemapuraneti emuchadenga, mwenje wezuva, maaororas uye mabhandi easteroid, kuratidza kudzika uye pfungwa yenzvimbo yaimbove isina kunzwikwa pamafoni enhare.
Mutengo wadzo wenguva dzose uri € 2,99 asi ikozvino unogona kuzviwana YEMAHARA kwenguva yakati rebei. Mhanya !!!
DudziroSafari - Dudziro & Taura Kuwedzeredzwa kweSafari
DudziroSafari Ndicho kuwedzerwa kwaunogona kududzira nawo akakwana mapeji ewebhu uye zvinyorwa kune yakawanda mitauro kubva kuSafari ye iPhone kana iPad.
Inoshanda nemuturikiri weBing mumitauro inodarika makumi mana, uye neGoogle Dudziro, mumitauro inodarika makumi matanhatu. Uyezve, inoverenga dudziro zvinonzwika, asi ichi chinhu chinopihwa sekuwedzera mukutenga-mu-app.
Mutengo wadzo wenguva dzose uri € 4,99 asi ikozvino unogona kuzviwana YEMAHARA kwenguva yakati rebei. Mhanya !!!
Hondo Academy 2: Kumabvazuva Mberi
Ndicho hondo nzira mutambo izvo zvinokutora iwe uende kumatunhu akakura uye anotonhora eRussia. Sy wenguva dzose mutengo i $ 19,99 asi ikozvino ndizvozvo kuderedzwa ne 75% uye iwe unogona kuiwana pane yako iPhone kana iPad chete € 4,99.
Uri kuenda kunoshongedza imba yako here kana kuita shanduko? Iine RoomScan Pro iwe unogona nyore kudhirowa mapurani pane yako iPhone, nekuti ivo vanenge vangadhonzwa neapp pachayo.
Mutengo waro wenguva dzose uri € 4,99 asi iwe unogona kuiwana izvozvi ne € 2,99, iyo 40% dhisikaundi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Mahara kana akaderedzwa maapplication nemitambo kwenguva yakaganhurirwa